သယံဇာတကျိန်စာသင့်နေတဲ့ ဖားကန့်မြေက ဘဝတွေအကြောင်း.... လောဘရဲ့သားကောင်ဖြစ်ပြီး လောဘနွံထဲမှာ နစ်သွားမှာလား? လောဘစိတ်ကြောင့် ဖားကန့်မြေမှာ ဘယ်လိုပဋိပက္ခတွေများ ဖြစ်လာမှာလဲ? ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ပြီး လောဘနွံထဲကနေ ရုန်းထွက်သွားနိုင်ကြမှာလား? ဖားကန့်မှော်ဒေသကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီး ခက်ခက်ခဲခဲ ရိုက်ကူးထားတဲ့ လောဘနွံရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး....
သယံဇာတကျိန်စာသင့်နေတဲ့ ဖားကန့်မြေက ဘဝတွေအကြောင်း....
လောဘရဲ့သားကောင်ဖြစ်ပြီး လောဘနွံထဲမှာ နစ်သွားမှာလား?
လောဘစိတ်ကြောင့် ဖားကန့်မြေမှာ ဘယ်လိုပဋိပက္ခတွေများ
ဖားကန့်မှော်ဒေသကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီး ခက်ခက်ခဲခဲ
လူမင်း၊ခင်လှိုင်၊JZ ဒေါင်လွဏ်း၊ဘုဏ်းသိုက်၊အေးမြတ်သူ၊NT ဆိုင်းနွယ်
ဒါရိုက်တာ JZ ဒေါင်လွဏ်း